မြန်မာ့ သင်္ဘောလောက တစ်ခေတ်ဆန်းစေချင် . . ~ MSU Portal
10/21/2013 11:01:00 PM Hpyae No comments
ရေးသူ - Tin Htut Naing
နယ်မြို့လေးမှာမွေးဖွားခဲ့သော ကျွန်ုပ် . . .
ငယ်စဉ် ကလေးဘ၀တုန်းက ဂွေလှိမ့် ကစားရင်း မိန်းမများကားမောင်းသည်ကို မြင်လျှင် မောရမှန်း မသိ အပြေးအလွှား လိုက်ကြည့်တတ်ခဲ့သည်။ အံ့မခန်း၊ အထင်တကြီး ငေးမောကြည့်တတ်ခဲ့သည်။ ယခုသော်ကား . . . မိန်းမမောင်းတာ ပိုစိတ်ချရ၊ ပို အန္တရာယ်ကင်းသည် ဆိုကာ ဘေးတွင်ထိုင်စီးတတ်လာပြီ။
ဆိုလိုချင်သည်မှာ . . မိန်းမများသည် ယောက်ျားများနှင့် ရင်ဘောင်တန်း၍ နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် တန်းတူ ရည်တူ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်နေကြလေပြီ။
ဗြဟ္မစိုရ်တရား ထွန်းကားရာ၊ ယဉ်ကျေး သိမ်မွှေ့လှသော ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိူင်ငံတွင်လည်း ယခုအခါ အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းများ စတင်ခေါ်ယူနေလေပြီ။ ၀မ်းမြောက်ဖွယ် အတိပင်။
ထို့အတူပင် ကျွန်ုပ် ဆန္ဒမှာကား အမျိုးသမီးများ သင်္ဘောသမီးဘ၀ခံယူကာ၊ သင်္ဘောပေါ်ကိုလဲ ရောက်လာစေချင်လှသည်။
ပထမဆုံး ပြေးမြင်မိသည်မှာ “ဇီးရိုး အယ်လ်ကိုဟော ပေါ်လစီ” ။ လိုက်နာပြီးသားမို့ စည်းကမ်း ထုတ်စရာ မလိုလောက်အောင်ပင်။ “အယ်လ်ကိုဟော တက်စ်” ဆိုတာပင် လိုတော့မည်မဟုတ်။ ခေတ်မှီ ကိရိယာများနှင့် “ပေပါ ၀ပ်ခ်” များပြားလှသော ယနေ့ ခေတ်ကာလတွင် သင်္ဘောအလုပ်မှာ မိန်းမများနှင့် လိုက်ဖက်လှသည်။
နောက်တစ်ခုက သွေးထွက်သံယို ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်း ပပျောက်သွားလိမ့်မည်။ လွန်ရော ကျွံရော ဆံပင်ဆွဲ ပါးရိုက် ကုတ်ခြစ်လောက်ပဲ ရှိမည်။ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ကြတာပဲ များမည်။ ဒါသည်ပင် တနည်းအားဖြင့် သင်္ဘောအတွက် ပို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ စကားနည်းတော့ အလုပ်ပိုတွင်မည်။ တစ်ဘက်တွင်လည်း အလွမ်းသင့်သူချင်း အတင်းတုတ်ချင်သော ၀ါသနာကြောင့် ဘာသာစကား အရာတွင် ပိုထူးချွန်လေမည်။
ဆေးဖ်တီး ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်လည်း ကြောက်တတ်သူများ ပီပီ “ချက်ခ်လစ်” များကို ၃-ခါပြန်လောက် အဖန်ဖန် ပြန်သုံးသပ်ခြင်းကြောင့် အလုပ်မတွင် စေကာမူ “ဇီးရိုး အက်စီးဒင့် တားဂက်” ဆိုတာကြီး နှင့် နှစ်ပါးဂဟေဆော်နိူင်မည်။
အနားယူ အပန်းဖြေခြင်း (Recreation) အနေဖြင့်လည်း ကိုးရီးယားဇါတ်လမ်းတွဲများတင်ထားပေးရုံနှင့် လုံလောက်လေပြီ။ မီးဖိုချောင်(Galley) တွင် ဇါတ်လမ်းအကြောင်းပြောရင်း ဟင်းကောင်းများ ဖန်တီးနိူင်လာမည်။ သင်္ဘောသားတိုင်း ငြီးငြူလေ့ရှိသော အစားအသောက်ကိစ္စ သင်္ဘောသမီးများခေတ်တွင် ပူပင်စရာမလိုတော့ပေ။ မိန်းမ များသာ သင်္ဘောပေါ် ရောက်လာလျှင်ဖြင့် ချက်ကြီး ရာထူးပင် R/O များ တိမ်မြုပ်သလို ပျောက်ကွယ်သွားနိူင်သည်။ အလှည့်ကျ ချက်နေကြရုံပင်။ လက်ရာလဲပြောင်း၊ တောင့်တ လိုက်ကြသည့် အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်း၊ ဗိုက်ရိုက်စား ဟု ဆိုရမည်ပင်။
ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် Seamanship ထက် ပိုအရေးပါနေသော House keeping။ ပင်လယ်ထဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်၊ ဆိပ်ကမ်းဝင်လျှင် လာစစ်ကြသူများ သန့်ရှင်းမှုကို အကြိုက်တွေ့လေမည်။ နဂို လှချင် ပချင် ၀ါသနာနှင့်လည်း ကိုက်ညီလှပေသည်။ မိန်းမသားပီပီ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်၊ တရားနှင့်မွှေ့လျော်၊ အိုးအိမ်မကွာ သင်္ဘောမောင်းနှင် အင်မတန်မှ လိုက်လျောညီထွေ လှပေသည်။
ဟော၊ ISPS အရရော ကြည့်ဦးမည်လား။ အိမ်မှာ မီးခံ သေတ္တာသော့လေး တကိုင်ကိုင် လုပ်သလိုမျိုး အရာရာကို ဂရုစိုက်တတ်ပုံနှင့် မည်မျှ ကိုက်ညီပါသနည်း။ အမြင်စူးရှမှု၊ ဖျတ်ကနဲ ကြည့်လိုက်ရုံနှင့် ဘယ်လောက်တန် အင်္ကျီဝတ်ထားသည်၊ စီးထားတာက ဘာဖိနပ် ဒက်ကနဲ မြင်တတ်ကြသေးသည်။ လူကဲခတ်တော်ခြင်းသည်ကား Security breach ကို တားဆီးနိူင်မည့် အဖိုးမဖြတ်နိူင်သော အရည်အချင်းပင်။
ယခုတဖန် ခေတ်ထလာသော MLC 2006 ၏ စာရွက်ပေါ် လိမ်လည်မှုများကိုလဲ မိန်းမဥာဏ်ဖြင့် ပိပိရိရိ ဟာကွက်မရှိအောင် ရွက်ဆောင်နိူင်လေမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အဖို့မှာကား ငြင်းနိူင်စရာပင်မရှိလောက်အောင်၊ အထူးပင် လျော်ကန်သင့်မြတ်လှပေသည်။ သင်္ဘောသမီး ခင်ပွန်း အနေဖြင့် ဘ၀ကို လုံခြုံအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိူင်မည်။
သင်္ဘောပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော မိမိဇနီး မိန်းမသား များ အတွက် အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေး တောင်းဆိုမှုများ ပိုမို ဆောင်ရွက်ပေးနိူင်မည်။
ကျားသဘာဝ အရ အိမ်မကပ်ပဲ ရောက်လေရာ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၊ ဘိလိယက်ခုံ၊ ကေတီဗွီ၊ မာဆတ် မကျန်၊ အာဘောင်အာရင်း သန်သန် ဆွေးနွေး နိူင်မည်။
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများနှင့် သောက်စားကြရင်း သင်္ဘောပေါ်ကသူတို့လေးတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များ ရစေမည်။ ဒေသခံ ကိုယ်စားလှယ်ထံတွင် ပုံမှန် လစာသွားထုတ်ရာတွင်လည်း လူရှိန်မည်။
တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းများအား စုံစမ်း၊ စာရင်းပေးသွင်းထားနိူင်မည်။ လူကိုယ်တိုင်မလာနိူင်မှီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် သင်္ဘောတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အချိန်များလေလွှင့်မှု နည်းစေမည်။ မိန်းမသားများဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်တိုင်မလာနိူင် ရကောင်းလားဟု စိတ် ဖု ခြင်းလည်း ပပျောက်စေမည်။
သူတို့ထားရစ်ခဲ့သော လူမမယ်ကလေးများကို အဖိုးအဖွား၊ နာနီများ အကူဖြင့် လူချွန်လူကောင်းလေးများ ဖြစ်စေရန် သွန်သင်ဆုံးမပေးမည်။ ကိုယ်ဝန်လွယ်သွားလျှင်လည်း မိန်းမတောထဲမှာ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှု ပိုမို ရရှိကာ နွေးထွေးကြင်နာမှုကို ရရှိစေမည်။
မွေးဖွားလွယ်စေရန် လေကောင်းလေသန့်နှင့် ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်စေမည်။ ကလေး အကြီးများ၏ ဒုက္ခပေးမှုမှ ကင်းဝေးမည်။ မွေးဖွားချိန် နီးလျှင်လည်း Maternal Leave အရ လွယ်လင့်တကူ သင်္ဘောဆင်းခွင့် ရနိူင်မည်။ Paid Leave အတွက်လည်း တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိလာမည်။
သင်္ဘောသမီး ခင်ပွန်းများသည်ကား နှစ်ဘက်သောဆွေမျိုးများ သာရေးနာရေး ကိစ္စများတွင်လည်း အားတက်သရော ရွက်ဆောင်ကြမည်။ သားမက်နှင့်ယောက္ခမ၊ ယောက္ဖချင်း မတည့်စရာ အကြောင်းမမြင်။ ၀ါသနာတူလျှင် ပုလင်းတောင် ထောင်လို့ ရနိူင်သေးသည်။ ခယ်မနှင့် အတည့်လွန်မှာပင် စိုးရိမ်ရသည်။
သင်္ဘောသမီး အသက်နှင့် ရင်းရှာထားသမျှမပျောက်ပျက်ရလေအောင် မော်ဒယ်မြင့် ကားများ ၀ယ်စီးရောင်း လုပ်ခြင်းဖြင့် တတ်စွမ်းသမျှ ပံ့ပိုးမည်။ အလှူအတန်းများလှည့်လည်စားခြင်း၊ ကောင်းစားနေသူ ငယ်ပေါင်းတို့၏ သောက်စားပွဲများ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခြင်းဖြင့် စားစရိတ်ကို ချွေတာမည်။
ဆတိုး တိုးပွားစေရန် ထိရောက်သော ကြိတ်ဝိုင်းလေးများဖွဲ့မည်။ အကောက် ရငွေများကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ သာရေးနာရေး အသင်းအဖွဲ့ တို့ထံ လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် အများအကျိုးဆောင် အာပတ်ဖြေမည်။
အတ္တ ပရ မျှ၍ နှစ်ဖြာသော အကျိုးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထမ်းရွက်မည်။
မြန်မာ့ သင်္ဘောလောက မည်မျှ ငြိမ်းအေးသာယာလေမည်နည်း။